တက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အကူအညီပေးခြင်း - Hello Sayarwon
တက်နေသော လူတစ်ယောက်ကို မြင်တွေ့ရတာက တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တက်ခြင်းအများစုက အချိန်ကြာမည်ဟု ထင်ရသော်လည်း အမှန်တကယ် စက္ကန့် ၆၀-၉၀ ထက်မကြာတတ်ပါ။
တက်နေသော လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ပါက အရေးကြီးဆုံးက စိတ်အေးအေးထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တက်သည့် အချိန်ကို မှတ်ထားပါ။ ၃ မိနစ်ထက်ပိုကြာပါက သို့မဟုတ် တက်နေသူက ကိုယ်ဝန်ရှိပါက အရေးပေါ်ဌာနကို ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
သင်ဟာ အကူအညီမဲ့သလို ခံစားရနိုင်သော်လည်း တက်နေသူ ဘေးကင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တက်ခြင်းက ကြွက်သားများ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စကားပြောခြင်း၊ အမြင်အာရုံ စသည်တို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ် စေပါတယ်။ တက်သောသူရဲ့ ခန္ဓါကိုယ် သည် ပြင်းထန်စွာ တုန်လှုပ်ပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ်မှ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ သတိလစ်သွား နိုင်ပါတယ်။ သင်သိထားသင့်သော အတက်ရောဂါ အမျိးအစား အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။
တောင့်တင်းပြီး ဆတ်ခနဲ လှုပ်ခါသော အတက်
တောင့်တင်းပြီး ဆတ်ခနဲ လှုပ်ခါသော အတက် ခေါ် convulsive seizure သည် အဖြစ်အများဆုံးသော အတက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သည်အတက်တွင် တက်သူသည် တောင့်တင်းခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားခြင်း၊ ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ ခြေနှင့် လက်များ လှုပ်ရှားခြင်း တို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းများ အပြာရောင်ပြောင်းကာ အသက်ရှူရခက်ခြင်း ၊ အသက်ရှူ ပုံမမှန်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းနှင့် ဆီးများ မထိန်းနိုင်ခြင်း ၊ လျှာကိုက်မိခြင်း၊ ပါးစပ်အတွင်းသားများ ကိုက်မိခြင်း များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့တက်နေသော သူကို တွေ့ပါက ခေါင်းမထိခိုက်အောင် ဘေးကင်းသော နေရာတွင် ရွှေ့ထားပါ။ အမြင့်မှ ပြုတ်ကျခြင်းများ မဖြစ်စေရန် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ညင်သာစွာ လှဲထားပါ။ ခေါင်းအောက်တွင် ခေါင်းအုံးထားပါ။ သို့မဟုတ် ခေါင်းအုံးမရှိပါက အင်္ကျီ သို့မဟုတ် လည်စည်းကို လုံး၍ ခေါင်းအောက်တွင် ထားပါ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကို သွေးနှင့် အရည်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိအောင် ခေါင်းကို ဘေးသို့ စောင်းထားပါ။ ဘေးဝန်းကျင်တွင် အန္တရာယ်ရှိမည့် အရာများ ရှိပါက ဖယ်ရှားပါ။
တက်နေသူရဲ့ ပါးစပ်ထဲသို့ မည်သည့် အရာမှ မထည့်ပါနဲ့။
ထည့်ပါက ကိုက်မိပြီး တက်နေသူ ဒါဏ်ရာရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သွားအတုများ ၊ အံကပ်များ ရှိပါက ဖယ်ရှားပါ။
တက်နေစဉ် တက်နေသုူကို ချုပ်နှောင်မထားပါနှင့် ။
ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ပုခုံး အဆစ်လွဲခြင်းကဲ့သို့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာများ ရစေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ တက်ခြင်း
သည် တက်ခြင်းမျိုးကိုလည်း ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ယခုတက်ခြင်းတွင် အဝတ်အစားကို ဆက်တိုက် ကိုင်နေခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကို လက်ဖြင့် ဆက်တိုက် တို့နေခြင်း၊ ထပ်ခါထပ်ခါ တံတွေးမျိုကျခြင်း၊ လျှောက်သွားခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုသို့တက်နေသောသူကို တွေ့ပါက အန္တရာယ် ရှိသော နေရာများမှ ဖယ်ရှားပါ။ ချုပ်ထားခြင်း၊ ထိတ်လန့်အောင် လုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ပြန်နေကောင်းသည်အထိ အစာကျွေးခြင်း၊ ရေတိုက်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
သတိရလာပါက ဘာဖြစ်သွားလဲ ပြန်ရှင်းပြပါ။ သင်နဲ့ရင်းနှီးသောသူ၊ ချစ်သူ၊ မိသားစုဝင်တွင် အတက်ရောဂါရှိပါက ဆေးကို အမြဲ ဆောင်ထားပြီး ပုံမှန်သောက်ရန် သတိပေးနေပါ။ အတက်ရောဂါနှင့် ပက်သက် သော အသိပညာများ ၊ တက်ခြင်းဖြစ်ပါက ရှေးဦးသူနာပြုမည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို လေ့လာ ဖြန့်ဝေပါ။ တက်သောသူကို တက်ကြွနေစေရန် အားကစား တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ အားပေးပါ။ အတက်ရောဂါက ထိန်းချုပ်မှု ရသွားပါက ပုံမှန် လူနေမှု ဘဝကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေ့စ်ဘော၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကနူးလှေလှော်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ ဟော့ကီကစားခြင်းများ ပြုလုပ်မည် ဆိုပါက အကာအကွယ် ဦးထုပ် ၊ အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
HelpingaPerson DuringaSeizure – Topic Overview. http://www.webmd.com/epilepsy/tc/helping-a-person-during-an-epileptic-seizure-topic-overview. Accessed 11 Mar 2017.
Epilepsy and First Aid for Seizures. http://www.webmd.com/epilepsy/guide/first-aid-seizures. Accessed 11 Mar 2017.
What to do when someone hasaseizure. https://www.epilepsy.org.uk/info/firstaid. Accessed 11 Mar 2017.
HelpingaPerson DuringaSeizure. http://www.emedicinehealth.com/helping_a_person_during_a_seizure-health/article_em.htm. Accessed 11 Mar 2017.